ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ဘယ်တော့ မြန်မာ ပြည် ရောက်မှာလဲ..? – Let Pan Daily
ရုရှားနိုင်ငံ ရဲ့ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ဘယ်တော့ မြန်မာပြည် ရောက်မှာလဲ သိချင်ကြတယ်။ သတင်းဖြန့်ဝေရရင်…၁။ ရုရှာကာကွယ်ဆေးဟာ တကယ်အစွမ်းထက်လို့ ဖြန့်မယ်ဆိုရင် တကမ္ဘာလုံးသုံးနိုင်ဖို့ ၁၄ နှစ်ကြာအောင်ဖြန့်ရပါ့မယ်။ကမ္ဘာက ဝိုင်းကူထုတ်ပေးတောင် တနှစ် အလုံးသန်း ၅၀၀ ပဲ ထွက်နိုင်တယ်။ ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ က ၇ ဘီလီယံကျော်တယ်။ ၂။ကာကွယ်ဆေးတွေဟာ အအေးခန်း နဲ့သယ်ရတယ်၊ မီးပျက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ထားသိုမှုမမှန်လို့ တဝက်က အာနိသင် မဲ့သွားတယ်။ တောနေ လူတန်းစားအထိ ရောက်ဖို့ သယ်ယူရေး အခြေခံအဆောက်အအုံအရေးကြီးပါတယ်တဲ့။
၃။ ကမ္ဘာက ထုတ်ဖို့အရမ်း လွယ်ကူတဲ့ ကာကွယ်ဆေးမျိုး ရှာဖွေတွေ့ခဲ့ရင်တောင် တကြိမ်ထိုး တနှစ်ခံလား၊ ဘီပိုးဆေးလို သုံးခါထိုးရမှာလား အပေါ်မူတည်ပြီး အခက်အခဲတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ရဦးမယ်။၄။သူဌေးနိုင်ငံတွေက စုဝယ်ကြရင် ဆင်းရဲသားနိုင်ငံရောက်ဖို့ကြာမယ်။
ဒီတော့ ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ သုံးပုံ တပုံ ထိုးနိုင်ဖို့ ကာကွယ်ဆေး ၂ ဘီလီယံကျော်လောက် ထွက်ရှိဖို့ ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာ လောက်မှ မှန်းနိုင်မယ်တဲ့။ ကျန်တဲ့လူတွေက ၂၀၂၁ ကျော်အထိ ဆက်စောင့်ရဦးမယ်တဲ့။အရှိတရားကို ဒီနေ့တွက်နေကြပုံတင်ပြတာပါ။ ဒီထက်ပိုမြန်လာဖို့ ဆုတောင်းရမှာပေါ့။
Credit (Kyaw Swa Min)
ရုရှားနိုငျငံရဲ့ ကိုဗဈ ကာကှယျဆေး ဘယျတော့ မွနျမာ ပွညျ ရောကျမှာလဲ..?
ရုရှားနိုငျငံ ရဲ့ ကိုဗဈ ကာကှယျဆေး ဘယျတော့ မွနျမာပွညျ ရောကျမှာလဲ သိခငျြကွတယျ။ သတငျးဖွနျ့ဝရေရငျ…၁။ ရုရှာကာကှယျဆေးဟာ တကယျအစှမျးထကျလို့ ဖွနျ့မယျဆိုရငျ တကမ်ဘာလုံးသုံးနိုငျဖို့ ၁၄ နှဈကွာအောငျဖွနျ့ရပါ့မယျ။ကမ်ဘာက ဝိုငျးကူထုတျပေးတောငျ တနှဈ အလုံးသနျး ၅၀၀ ပဲ ထှကျနိုငျတယျ။ ကမ်ဘာ့ လူဦးရေ က ၇ ဘီလီယံကြျောတယျ။ ၂။ကာကှယျဆေးတှဟော အအေးခနျး နဲ့သယျရတယျ၊ မီးပကျြတဲ့နိုငျငံတှမှော ထားသိုမှုမမှနျလို့ တဝကျက အာနိသငျ မဲ့သှားတယျ။ တောနေ လူတနျးစားအထိ ရောကျဖို့ သယျယူရေး အခွခေံအဆောကျအအုံအရေးကွီးပါတယျတဲ့။
၃။ ကမ်ဘာက ထုတျဖို့အရမျး လှယျကူတဲ့ ကာကှယျဆေးမြိုး ရှာဖှတှေခေဲ့ရငျတောငျ တကွိမျထိုး တနှဈခံလား၊ ဘီပိုးဆေးလို သုံးခါထိုးရမှာလား အပျေါမူတညျပွီး အခကျအခဲတှအေမြားကွီးရငျဆိုငျရဦးမယျ။၄။သူဌေးနိုငျငံတှကေ စုဝယျကွရငျ ဆငျးရဲသားနိုငျငံရောကျဖို့ကွာမယျ။
ဒီတော့ ကမ်ဘာ့ လူဦးရေ သုံးပုံ တပုံ ထိုးနိုငျဖို့ ကာကှယျဆေး ၂ ဘီလီယံကြျောလောကျ ထှကျရှိဖို့ ၂၀၂၁ ဒီဇငျဘာ လောကျမှ မှနျးနိုငျမယျတဲ့။ ကနျြတဲ့လူတှကေ ၂၀၂၁ ကြျောအထိ ဆကျစောငျ့ရဦးမယျတဲ့။အရှိတရားကို ဒီနတှေ့ကျနကွေပုံတငျပွတာပါ။ ဒီထကျပိုမွနျလာဖို့ ဆုတောငျးရမှာပေါ့။
ဖယောင်းတိုင် မီးနဲ့ စာကျက်ပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အမှတ် အများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့‌ ကျောင်းသား….